Dhismaha Guryaha Flexhouse waa guri hal qoys ah oo ku yaal harada Lake Zurich ee Switzerland. Waxaa lagu dhisay barxad adag oo saddex gees leh oo dhulka ah, oo lagu tuuray inta u dhaxaysa khadka tareenka iyo wadada loo maro deegaanka, Flexhouse waa natiijada ka soo kabashada caqabado badan oo qaab dhismeedka ah: masaafada xadaynta xadka iyo mugga dhismaha, qaabka saddex geesoodka ah ee qisada, xaddidaadaha ku saabsan luuqadaha maxalliga ah ee maxalliga ah. Dhismaha maxalliga ah ee leh derbiyad ballaadhan oo dhalo ah iyo jaakad cad-cad u eg ayaa aad u fudud una muuqata mobilada oo u eg markab mustaqbal leh oo ka soo gudubtay harada isla markaana waxay isku aragtay meel dabiici ah oo lagu qubo.
Xarunta Xiriirinta Ee 6280.ch
Xarunta Xiriirinta Ee 6280.ch Waxaa dhex yaal buuraha iyo harooyinka ku yaal bartamaha Switzerland ee quruxda badan, 6280.ch xarunta wada shaqeynta ayaa jawaab u ah baahida sii kordheysa ee goobaha shaqada ee rogrogmi kara ee la heli karo ee meelaha miyiga ah ee Switzerland. Waxay siisaa iskaa-wax-u-madax-bannaan maxalliga ah iyo ganacsiyada yar-yar goob shaqo oo casri ah oo leh dhex-dhexaadinno dhiirrigeliya goobaha bucleic-ka ah isla markaana ku ixtiraamaya warshadihi hore ee ay soo jireenka ahaayeen iyagoo si adag u aqbalaya dabeecadda qarniga 21aad ee nolosha shaqada.
Naqshadeynta Xafiisku Wejiga adag ee mashruucu wuxuu ahaa in lagu qaabeeyo goob shaqo oo xawli ah oo cabir aad u weyn gudahood waqti aad u xadidan iyo in la ilaaliyo baahiyaha jireed iyo shucuur ee adeegsadayaasha xafiisku had iyo jeer ku hayaan wadnaha naqshadda. Iyada oo la socota qaabeynta xafiiska cusub, Sberbank waxay dejisay tallaabooyinka ugu horreeya ee casriyeynta fikradahooda goobta shaqada. Naqshaddan cusub ee xafiiska waxay awood u siineysaa shaqaalaha inay qabtaan howlahooda jawiga shaqo ee ugu habboon waxayna dhistaa astaan cusub oo qaab dhismeedka u leh hay'ad maaliyadeed hogaamisa Ruushka iyo Bariga Yurub.
Xafiiska Waxaa loo qaabeeyey IWBI's Heerka Dhismaha WELL, xarunta HB Reavis UK waxaa looga golleeyahay in lagu dardar galiyo mashruuc ku saleysan mashruuc, kaasoo dhiiri galinaya burburka qaybta silos oo ka dhigaysa ka shaqeynta kooxa kala duwan mid sahlan oo la heli karo. Iyadoo la raacayo Heerka Dhismaha WELL, qaabeynta goobta shaqada ayaa sidoo kale loogu talagalay inay wax ka qabato arrimaha caafimaadka ee la xiriira xafiisyada casriga, sida dhaqdhaqaaqa la'aan, nalalka xun, tayada hawada oo liidata, xulashada cuntada oo xaddidan, iyo walaac.
Guriga Fasaxa Ka dib markii ay istaagtay muddo ka badan 40 sano, kaniisad ku taal magaalada Methodist ee dilaacday waqooyiga England ayaa loo beddelay guri fasaxa iskiis u shaqeysta oo gaaraya 7 qof. Dhismuhu wuxuu ilaaliyay astaamaha asalka ah - daaqadaha Gothic dhaadheer iyo hoolka weyn ee kaniisadda - oo u beddelay masjidka meel loo wada dhan yahay oo raaxo leh oo daadadku ku soo daateen. Dhismaha qarnigan 19-aad wuxuu ku yaalaa miyiga Ingriiska miyiga ee lagu bixinayo aragtiyo panoramic ah buuraha duudduuban iyo quruxda baadiyaha ah.
Xafiiska In kasta oo ay tahay goob xafiis, waxay isticmaashaa iskudhaf geesinimo ah oo agabyo kala duwan, iyo qaab dhismeedka cagaaran ee cagaaran ayaa bixisa dareen aragtiyeed inta lagu jiro maalinta. Naqshadeeyahu waxa kaliya oo uu bixiyaa boos, iyo muhiimada banaan ee wali waxay kuxirantahay milkiilaha, adoo adeegsanaya awooda dabeecadda iyo naqshadeeyaha qaabkiisa gaarka ah! Xafiisku mar dambe ma ahan hal shaqo, naqshadeynta ayaa aad u kala duwan, waxaana loo adeegsan doonaa meel ballaaran oo bannaan si loo abuuro fursado kaladuwan oo u dhexeeya dadka iyo deegaanka.
Dhismaha Guryaha Xarunta Xiriirinta Ee 6280.ch Naqshadeynta Xafiisku Xafiiska Guriga Fasaxa Xafiiska